चिसो मौसम मुटु रोगीका लागि किन जोखिमपूर्ण? कसरी बच्ने?
‘गतिशील र ऊर्जाशील कांग्रेस बनाउने मेरो योजना’ : शेखर कोइराला
कांग्रेसका भावी नेतृत्व चयन गर्न सोमबार मतदान हुँदै छ । सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिन चार जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु : सहमहामन्त्री डा महत (अन्तर्वार्ता)
युएन र अमेरिकासमक्ष सैन्य सहयोगका लागि हाइटीको आह्वान
हाइटीका राष्ट्रपति जोभेनेल मोइजेको बुधबार बिहान घरमै गोली हानी हत्या गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको हत्यासँगै हाइटीमा राजनीतिक संकट पलाएको छ । पहिल्यैदेखि भोकमरी, सामूहिक हिंसा र कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको हाइटी झन् ठूलो राजनीतिक संकटमा फसेको छ ।
माधव नेपाल समूहले अर्को पार्टी खोल्ने
तर तपाईंहरूले शुक्रबार गरेको निर्णयले त न प्रतिनिधिसभा जोगियो, न एमाले जोगाउन सक्नुभयो, घाटा त यहाँहरूलाई नै भयो हैन ? प्रतिनिधिसभामाथि ओलीजीले नै एकपछि अर्को प्रहार गर्न थालेपछि हामीले के गर्न सक्छौं र ? हामीले त जोगाउन सक्दो प्रयत्न गरेकै हो नि । उहाँले असंवैधानिक कदम चालेपछि हाम्रो उपाय लागेन । प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्र जोगाउन हामी फेरि पनि लागेका छौं । जो लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभा जोगाउन लाग्छ, उसैले कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउने हो । लोकतन्त्र जोगाए मात्र न कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको उपादेयता रहने हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र परिवर्तनविरुद्धमा, विदेशी दासताको पक्षमा, विदेशीले लगाएको काममा लागेपछि त कसरी प्रतिनिधिसभा जोगिन्छ ? तपाईंहरूले पनि समयमै निर्णय गर्न त नसक्नुभएकै हो नि ? निर्णय गर्न त सबै पाक्नुपर्‍यो । यत्तिकै निर्णय गरेर भएन । लोकतन्त्र जोगाउने भन्ने तर आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई हराउन अर्को पार्टीकालाई सहयोग गर्ने दोहोरो चरित्र भयो भन्ने आक्षेप छ, स्पष्टीकरण नै सोधिएको छ ? हामीसँग कुनै मतलब नराखेर उहाँले नै दक्षिणपन्थीहरूसँग साँठगाँठ गरेको होइन ? उहाँले एकलौटी गर्नुभएको छ । विदेशीसँग याचना गर्नुभएको छ । ओलीजीले सोधेको स्पष्टीकरणबारे के कुरा गर्नु ! पार्टी एकताका लागि गठन भएको कार्यदल के हुन्छ ? त्यो कार्यदलको औचित्य उहाँले सिध्याइदिनुभयो । यत्रो कार्यदल बनेको छ, सरसल्लाह गर्नुपर्दैन ? सोध्दै नसोधी संसद् विघटन गर्ने ? केही सल्लाह गर्नुपर्दैन ? अध्यादेश ल्याउनुअघि केही सल्लाह गर्नुपर्दैन ?
निजामती प्रशासन लोकप्रिय नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ : उमेश मैनाली
विकास आयोजनाहरूलाई बजेटको अभाव हुन दिन्न :अर्थमन्त्री पौडेल
‘सरकार निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, अल्झाउने, हतोत्साहित बनाउने पक्षमा छैन’-अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्रीःकोरानाको संक्रमण कायमै छ । खोप नआउञ्जेल यसको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने खाँचो छ । कोरोना संक्रमणको बीच पनि हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने केही काम गरिरहेका छौँ । प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछु ।